झस्किए अनमोल, ‘भिखारी’ हेडलाइनप्रति ध्यानाकर्षण « Ramailo छ
झस्किए अनमोल, ‘भिखारी’ हेडलाइनप्रति ध्यानाकर्षण
समय : 6:41 pm
युवा स्टार अनमोल केसी लाई लिएर मिडियामा विभिन्न किसिमका समाचार आउँछन्, ट्रोल बन्छन् । आफुसँग जोडिएका जे जति खबर आएपनि अनमोल मौन बस्छन् । अफिसियल ईभेन्टमा मात्रै अनमोल आफुसँग जोडिएका खबर बारे जवाफ दिन्छन् ।
तर बुधबार मध्यान्ह् केही अनलाईन मिडियामा आफुसँग जोडेर समाचारमा आएको हेडलाइनबाट भने ‘कृ’ नायक झस्किएका छन् । अनमोलले केही अनलाइन मिडियामा आएको समाचार र हेडलाइन प्रति विश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन् । सम्भवतः पहिलो पटक अनमोलले आफ्नो फेसबुकमा शुभचिन्तकलाई सम्बोधन गर्दै स्टाटस लेखेका हुन् । अनमोलले यस्तो लेखेका छन् :
गाउँले भनेका भिखारी हुन् भन्ने समाचारप्रति अनमालको किन भयो त ध्यानाकर्षण ? किन शुभचिन्तक समक्ष उनले त्यस प्रकारको समाचारप्रति विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे ? यो स्वयम अनमोलले सोच्ने विषय हो । तर अनमोलको यो स्टाटसलाई ड्रिम्स जोडी साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहको प्रसंग सँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
केही महिना अगाडी साम्राज्ञीले गाउँले रोल गर्दिंन भन्ने समाचार भाइरल हुँदा उनले दर्शकबाट गालीको सामाना गर्नु परेको थियो । गाउँले रोल गर्दिंन भनेको छैन भनेर साम्राज्ञीले माफी नै माग्नु परेको थियो । यसकारण अनमोलले शुभचिन्तकलाई सर्तक गराएको हुनुपर्दछ ।